အင်္ဂါနေ့ပွဲစဉ်၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! အင်္ဂါနေ့ပွဲစဉ်၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
This bonus will be active daily on 2nd, 9ကြိမ်မြောက်, 16ကြိမ်မြောက်, 23rd and 30th May 2017 (BST).
To be eligible fora50% up to £50 Bonus, ကစားသမား£ 10 နိမ့်ဆုံးငွေသွင်းရပါမည်.